श्रीमती र छोराछोरीलाई ह, थौडा प्र, हार गरेर मा, रे, त्यसपछि आफैं भवनबाट हा,मफाले, सु, साइड नोटमा यस्तो खुलासा…. -
Home News श्रीमती र छोराछोरीलाई ह, थौडा प्र, हार गरेर मा, रे, त्यसपछि आफैं...
श्रीमती र छोराछोरीलाई ह, थौडा प्र, हार गरेर मा, रे, त्यसपछि आफैं भवनबाट हा,मफाले, सु, साइड नोटमा यस्तो खुलासा….
आ’त्मह त्या जस्तो ठुलो कदम चाल्नु ठीक होइन। तर सबैभन्दा नराम्रो कुरा यो हो कि तपाईं आफैंलाई पनि मा,र्नु हुन्छ अरूलाई पनि। आजकल यस्ता धेरै खबरहरु आइरहेका छन्, अहिले त मान्छे आफैले आ’त्महत्या गर्छ तर परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि डुबाउँछ।
अब छत्तीसगढको राजधानी रायपुरको नयाँ रायपुरको यो घ, टनालाई लिनुहोस्। यहाँ पञ्चायत विभागमा कार्यरत चपरासी झंकार भास्करले सेक्टर २७ स्थित भवनबाट हाम फालेर आ’त्मह त्या गरेका छन्।
दुःखको कुरा के छ भने आ’त्महत्या गर्नुअघि उनले आफ्ना दुई छोराछोरी र श्रीमतीलाई पनि हथौडाले प्र,हार गरेका थिए। यो हृ दयविदारक घ, टनालाई विस्तृतमा बुझौं।
भवनबाट हाम फालेर प्योनले गरे आ’त्मह त्या
झंकार भास्कर नामका व्यक्ति पञ्चायत विभागमा चपरासीको पदमा थिए। उनी ७ वर्षीया छोरी, ३ वर्षीय छोरा र श्रीमती सुक्रिता भास्करसँग सेक्टर २७ मा बस्दै आएका थिए। राति २:३० देखि ३ बजेतिर भास्करका छिमेकीले केही खसेको आवाज सुने। बाहिर निस्कँदा भास्कर र गतले लत पतिएको भुइँमा लडिरहेका थिए। उनलाई यस्तो अवस्थामा देखेपछि प्र हरीलाई खबर गरिएको थियो।
हा,म फा,ल्नुअघि श्रीमती, छोराछोरीलाई ह थौडा प्र,हार गरे
प्र हरी घ,टनास्थलमा पुगेपछि भास्करका छोराछोरी र श्रीमती दुवै र गतले ल, तपतिएको अवस्थामा देखे। भास्करले उनलाई प्र हार गरेको ह थौडा पनि थियो। दुवै छोराछोरीको मृ,त्यु भइसकेको थियो भने केही श्रीमतीको श्वासप्रश्वास चलिरहेको थियो। त्यसैले उनलाई अस्पताल लगियो।
पारिवारिक वि,वादका कारण कदम चालिएको छ।
राखी प्र हरी चौकीले भास्करको कोठाबाट चार पृष्ठको सु, साइड नोट पनि फेला पारेको छ। उक्त नोटमा उनले करिब एक महिनाअघि रेलवे स्टेशनमा भेटिएको सन्तोष कंवरको श, व उल्लेख गरेका छन्। सन्तोष कंवरको मृ, त्युको सन्दर्भमा झंकार भास्करले लेखे-
“मेरो भाइले आफ्नी श्रीमतीको ह, त्या गर्यो। अब यसमा मेरो के दोष? यसका लागि मलाई किन बारम्बार ठट्टा गरिन्छ? हरेक पटक र,क्तपातपूर्ण परिवारको गाली सुनिन्छ। आज पनि त्यस्तै भयो। म मेरा बच्चाहरूलाई मा, र्न चाहन्नथें। तर, आमाबुवाविना छोराछोरीको जीवन कसरी बित्ने होला भन्ने सोचाइले ज्या ,न लि,यो। यो कामको लागि मलाई माफ गर्नुहोस्।”
अहिले प्र हरीले यस विषयमा सम्पूर्ण अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो घ, टनापछि सो क्षेत्रमा शो,क छायो। भास्करले ज्या न दिनु परेको भए दिन्थ्यो होला तर किन उनले आफ्ना निर्दोष सन्तानको जीवन स,माप्त गरे? खैर, यो सम्पूर्ण बिषयमा तपाईको राय के छ, कृपया हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोस्।
Previous articleरेखा थापा पनि बिनयजंगसँग बेवारिसे श व ज लाउन आउँदै (भिडियो हेर्नुस्)
Next article८ महिनाको गर्व बोकेकी युवती यसरी हाम्फालेर ज्या न फालिन्,घरमा सासु र श्रीमान यसो भन्दैछिन् (भिडियो हेर्नुस्)